WARBIXIN: Shantii Halyey Ee Sida Mucjisada Ay Isku Fahmeen Lionel Messi Iyo Dhibaatadii Ay U Geysteen Kooxihii Ka Hor Yimid – Cadalool.com
WARBIXIN: Shantii Halyey Ee Sida Mucjisada Ay Isku Fahmeen Lionel Messi Iyo Dhibaatadii Ay U Geysteen Kooxihii Ka Hor Yimid
Xiddiga Barcelona ee Lionel Messi ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah xiddigihii ugu waaweynaa ee kubadda cagta soo maray, waxaana taas ka caawisay xirfaddiisa mucjisada ah iyo qaabka aanu qofnaba ula mid ahayn ciyaartooyada hadda dunida jooga.
Muddo 14 sannadood ah oo uu Barcelona u ciyaarayey, waxa uu sameeyey wax aan la qiyaasi karin, Shan jeer ayuu ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or, shan jeer waxa uu qaatay kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Yurub, afar jeer waxa uu ku guuleystay UEFA Champions League, sagaal jeer waxa uu hantiyey koobka LaLiga, 6 jeer waxa uu u damaashaaday koobka Copa del Rey. Waxa u dheer abaal-marino kale oo badan oo shaqsi ah iyo kuwo kooxeed oo uu Barcelona kula guuleystay.
Muddadii uu joogay Barcelona, waxa garoonka Camp Nou ay iskugu yimaaddeen laacibiin badan oo dunida caan ka ah oo qaarkood ay ku wada guuleysteen koobab badan, halka kuwo kalena ay ku dhamaysteen waqti kooban oo aanay u suurtogelin inay xattaa xidhiidh wanaagsan ku samaysanin gudaha garoonka.
Xiddiga reer Argentina ee Messi, weligii uma ciyaarin koox aan ahayn Barcelona, waxaana usoo raaca xulka qarankiisa oo kaliya oo uu kala kulmo dhalleecayn ah inaanu ugu hagar bixin sida uu naadigiisa nafta ugu huro.
Haddaba, shabakadda ciyaaraha ee cadalool waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa shan ciyaartoy oo aan hadda joogin Barcelona oo si mucjiso leh ay isku fahmi jireen Lionel Messi inta ay garoonka ku jiraan, kuwaas oo fahamkoodu sababay inay wada-jir ugu damaashaadaan guulo waaweyn oo ay gaadheen.
Lionel Messi oo aanay cidina aqoonin kartidiisa, duniduna garanaynin ayaa garoonka Camp Nou soo dhex-istaagay, waxaana soo geliyey tababarihii tababarihii reer Holland ee Frank Rijkaard, laakiin wuxuu u baahnaa cid garab qabata isla markaana ku caawisa gudaha garoonka.
Xiddigii reer Brazil ee Ronaldinho ayaa xilligaas ahaa hoggaamiyaha Barcelona, ayaa kaalin weyn ka qaatay kobcinta xirfadda Leo iyo horumarintiisa bilowgii hore ee xirfaddiisa, waxaana uu sannadkii 2004 kusoo dhoweeyey kooxda waaweyn, isaga oo mar kastana la garab taagnaa talo, wax u sheeg iyo si kasta oo uu uga caawin lahaa inuu saldhigo qolka lebbiska oo uu farxad ku dareemo.
Intii ay wada joogeen Camp Nou, Ronaldinho waxa uu ahaa ninka koowaad ee uu ku tiirsan yahay Leo Messi, markii ay taariikhdu ahayd May 1, 2005, waxa uu siiyey kubaddii ugu horreysay ee uu dhaliyey oo ahaa kulan ay Barcelona la ciyaaraysay naadiga Albacete.
Goolasha tirada badan ee hadda gaadhay 500, waxa fure u noqday caawinta uu aftaxa uga dhigay Ronaldinho, laakiin markii uu kobcay, waxay isku fahmi jireen si cajiib ah oo midba midka kale si yaab leh ula socday dhaqdhaqaaqiisa.
Guji 2 illaa 5 si aad u wada akhriso xogtan